प्रकाशन: असल अभ्यास – Page2– National Federation of the Disabled – Nepal
गाडि ढ्याक्क रोकियो । कर्ण दाई भन्ने आवाज आयो । एक जना व्यक्तिको सानो घरभित्रबाट हजुर भन्ने आवाज आयो । गाडिबाट उत्रेका व्यक्तिले कर्ण दाईलाई चुङ्गी करबापतको पैसा दिए । कर्ण दाईले वील दिए । यसपछि गाडि फेरि अगाडि बढ्यो । यस्तै दैनिकका साथ जीवन अघि बढिरहेको छ कर्णबहादुरको । कर्ण वहादुर सार्की आजभन्दा ४१…
Read More कर्णेबाट कर्णदाईContinue
२०६५ सालको साउन महिना थियो । सिमसिम पानी पर्दै थियो । त्यसदिन आशाराम पनि नेपालगंजको यात्रामा थिए । बस चढेको १ घण्टा भएको थिएन उनी चढेको बस दुर्घटनामा पर्यो । दुर्घटनामा केहीले ज्यान समेत गुमाए । तर उनलाई भने भगवानले हात थापीदिए । उपचारले उनको ज्यान त जोगायो तर उनी हिडडुल गर्न नसक्ने भए ।…
Read More पुरा हुदै आशारामका आशाहरुContinue
मनिष चौधरीको कैलाली जिल्लाको साडेपानी गाविसमा बि.सं. २०६४ सालमा जन्म भएको थियो । उनी जन्मजात बहु अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनको शरिरका कुनै पनि भाग चल्दैन थियो । अब केहि गर्न सकिदैन होला भनेर उनका परिवारले आशा मारिसकेको थियो । कहिले मर्छ अनि लगेर फालिदिने भनेर बाटो कुरेर बसेका थिए । आफूले खाना खाने…
Read More खाना पकाउने भाडा भित्रको जिन्दगीContinue
म भारतको दिल्लीमा एउटा कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ । काम गर्ने क्रममा २०६२ सालमा मेरो दाँया हातको हत्केलाको भाग मेशिनमा परी काट्यो । जसको पिडाले म असाध्यै छट्पटिएँ । यसपछि मलाई हिनताबोध भयो । अर्काको देशमा बस्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा गई केही काम गरौं भन्ने लाग्यो । त्यही भएर म घर फर्कें । मलाई भेट्न र…
Read More बलरामको बलContinue
विगतका दिन सम्झदै विष्णु भन्छन् । पढ्न त पढियो तर जागिर कहाँ खाने ? जागिर कसले दिन्छ ? निकै चिन्तामा थिएँ । जागिरका लागि धेरै भौतारिएँ । धेरै आश्वासन पाएँ । तर कसैले पनि जागिर दिएनन् । जिन्दगी देखि दिग्दार लागिरहेको थियो । ३२ वर्षिय विष्णुप्रसाद उपाध्यायले आफ्नो विगतको व्यथा सुनाए । कपिलबस्तु जिल्लाको…
Read More शिक्षाको ज्योति बाल्दैः विष्णुप्रसादContinue
आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको सामान्य परिवारमा पासाङ्गचोमु शेर्पाको जन्म भएको हो । उनको परिवारमा आमा बुवा सहित ३ बहिनी र १ भाइ छन् । उनी परिवारको जेठी छोरी हुन् । घरको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनिय थियो । आफ्नो वारीमा फलेको अन्नले वर्ष धान्न पुग्दैन थियो । गरिब भए पछि ऋण पनि कसैले दिदैनथ्यो…
Read More सुन्दर भविष्यको यात्रामा पासाङ्गचोमुContinue
पूर्वको १ नम्बर प्रदेशमा झापा जिल्ला पर्छ । झापा जिल्ला शैक्षिक, आर्थिक तथा राजनितिक हिसाबले नेपालकै सुगम मानिन्छ । यद्यपी यहाँको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अवस्था भने नाजुक नै थियो । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा पनि पाउदैनन् थिए । यसको बारेमा चेतनाको पनि अभाव थियो । वि.स. २०६६ सालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल जिल्ला च्याप्टर…
Read More चौतर्फी पहुँच बढाउदै स्वावलम्वन समुहContinue
आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छु । लाग्छ म पनि अरु जस्तै त छु । तर किन मलाई सबैले हेला गर्छन ? समाजले त हेला गर्यो तर आफ्नै घरबाट पनि किन अपमान भएको होला ? मलाई किन मान्छेले बुझ्दैनन् ? के ममा अपाङ्गता हुनु मेरै दोष हो र ? म जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समाजमा अरु सरह…
Read More घरै छोड्ने निर्णय फिर्ताContinue
पुर्वी नेपालको अत्यन्तै रमणीय जिल्ला ईलाम । जहाँ सुन्दरताको वयान गरेरै साध्य छैन । हो यहि ठाउँको कन्याम गाविस वडा नं ८ मा सविना राईको वि.सं. २०५२ सालमा जन्म भएको थियो । उनको परिवारको आर्थिक अवस्था सामान्य थियो । ७ जनाको परिवार चलाउन उनको बुबा आमालाई त्यति सजिलो थिएन । त्यस माथि सविना जन्मदै अपाङ्गता…
Read More परिवर्तनकी वाहक सविनाContinue
मेरो नाम श्रवणकुमार यादव हो । म शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ । अहिले म २९ वर्षको भएँ । हाल म सनसाईन नामक संस्थामा काम गर्छु । मेरो मासिक १० हजार तलब छ । यसले मलाई आफ्नो अध्ययन र सामान्य घर परिवार चलाउन सहज भएको छ । निकै खुसी मुद्रामा श्रवणकुमार प्रस्तुत भए । उनले…
Read More कलियुगका श्रवणकुमारContinue